Karazam-bolo mahitsy ary iza no tokony hofidina | Bezzia
Susana Garcia | | beauty, Fandram-bolo
Betsaka ny olona te hanana volo mahitsy amin'ny fotoana rehetra, koa efa misy fomba anaovana azy io foana. Betsaka ireo karazana volo mahitsy Hiresaka momba azy ireo isika, satria ny olona tsirairay dia afaka misafidy iray na iray hafa miankina amin'ny zavatra ilainy.
Misy samy hafa fomba fanitsiana volo, ny sasany amin'izy ireo dia mihelina ary ny sasany maharitra na maharitra herinandro maromaro. Lazainay aminao izay tombony sy fatiantoka ananany afaka misafidy izay mifanaraka indrindra amin'izay ilain'ny olona tsirairay na tadiaviny amin'ny volon'izy ireo. Ka raha mieritreritra ny hanarina ny volonao ianao dia mariho ireo fomba hanarenana ny volonao ireo.
1 Manitsy amin'ny vy
2 Mahitsy Japoney
3 Keratin mahitsy
4 Fanalefahana laser
5 Mialà amin'ny taninoplasty
Manitsy amin'ny vy
Io no zavatra mahazatra indrindra amin'izy rehetra, ary ankehitriny dia manana kalitao ny mpanitsy volo, izy ireo no mikarakara ny volonay ary manome valiny tsara ihany koa izy ireo. Manala ny hamandoana ny mpandamina, ka malama kokoa ny volo noho ny fanamainana. Mora ampiasaina ihany koa izy ireo ary misy habe samihafa, mahita azy ireo na dia amin'ny haben'ny dia aza. Ny fatiantoka hitantsika amin'ity karazana fanitsiana ity dia ny hoe tsy maharitra izy io fa maharitra ihany mandra-panasana ny volonao indray. Ary tsy diso izy io raha misy hamandoana eo anelanelany.
Ny mahitsy japoney dia iray amin'ireo mahomby indrindra misy ary miantoka a malefaka-porofo hamandoana. Ho fanampin'izay, rehefa mitombo ny volo dia tsy maintsy hataontsika amin'ny fakany fotsiny. Izy io dia mety tsara ho an'ny vehivavy manana volo olioly sy mikotraka be izay maniry mahitsy tonga lafatra amin'ny volon'izy ireo. Ny iray amin'ireo lesoka mety hipoitra dia ny iray amin'ireo lafo indrindra any ivelany any, saingy tonga lafatra ny valiny.
Nalaza be ny fanitsiana keratin na breziliana, satria io karazana fanitsiana io dia manampy ny volo simba hiverina. Manome sakafo ny volo ary misy vokany amin'izany maharitra 4 ka hatramin'ny 6 volana. Izy io dia ho an'ny volo tena olioly na simba ary frizzy, izay aharihary ny fanitsiana, fa ny volo kosa tsy milamina toa ny an'ny Japoney. Izy io dia mora vidy kokoa noho ny fanitsiana Japoney fa misy fatiantoka kosa ny fampiasa formaldehyde indraindray, akora iray izay rehefa tsofoka dia karsinogenika. Ny lesoka iray hafa dia ny andro vitsivitsy dia tsy afaka manasa ny volonao na mampiasa fehikibo ianao mba tsy hifanaraka amin'ny endriny. Tsy afaka mampiasa loko koa ianao afaka 15 andro.
Ity laser manga ity dia manidy ny cuticle ary salama sy hydrated ny volo. Vaovao izany rehefa hikarakara sy hanitsy volo. Tafiditra ao ny fampiasana vokatra mahitsy amin'ny volo ary avy eo manasaraka azy ho kofehy hampiharana ny laser. Haingam-pandeha izy avy eo tsy mila miandry mihoatra ny ora vitsivitsy vao manasa volo na manao taovolo. Ny zavatra tsara indrindra dia ny fitsaboana izay mikarakara sy manitsy ny volo ary azo ampiasaina amin'ny karazam-bolo rehetra, manomboka amin'ny olioly ka hatramin'ny savony, ary amin'ny volo miloko na tsia.
Mialà amin'ny taninoplasty
Ity dia iray amin'ireo fitsaboana manitsy volo vaovao. Ankoatr'izay dia tsy maintsy lazaina fa izy io dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny heviny fa voajanahary kokoa io, noho izany dia hikarakara bebe kokoa ny volontsika. ny taninoplasty dia avy amin'ny tannins, izay eo amin'ny hoditry ny voaloboka, amin'ny hazo terebinta sy amin'ny chestnut. Mandritra izany dia manasa ny volo amin'ny shampoo tsy misy sulfate, maina ary asiana kofehy, fanorana, ny vokatra. Avelao izy hihetsika mandritra ny antsasak'adiny ary hofehezina vy amin'ny farany. Ity fitsaboana ity dia maharitra raha mbola mitombo ny volo, rehefa tsy maintsy averina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Karazana volo mahitsy ary iza no safidiana
Raha manana 10 euro ianao dia manana ireto akanjo Lefties ireto